Cunto fudud oo shukulaato macaan ah + Video - Dhaxan-Qaboojin Iyo Iicil
Cunto karis shukulaato fudud ah oo fudud, dhalaalaya oo si macaan mugdi ah, caano ama ganache shukulaatada cad
Kaamil ah shukulaato ganache recipe kama badna shukulaatada iyo kareemka. Kudar ku dar oo walaaq! Waxay kuxirantahay heerkulka, ganache shukulaatada waxay noqon kartaa muraayad, dhibic, dhaxan ama xitaa xamuul.
Laakiin maxaa dhacaya markii ganacheyahaagu khaldamo? Akhriso si aad ubarato ma aha oo kaliya sida loo sameeyo shukulaatada shukulaatada ugu fiican laakiin waxa la sameeyo si loo xaliyo dhibaatooyinka guud.
Waan ogahay samaynta shukulaatada ganache karinta codad aad u cabsi badan oo 'adag'. Markii ugu horeysay ee aan sameeyo shukulaatada ganache , waxay ahayd gabi ahaanba fashil. Xaqiiqda oo ah inay ahayd kaliya LABA maado hadana wali fashilmay ayaa iga sii cabsi badan! Sideed isugu qasan kartaa laba shey?
Ma ahayn ilaa aan ka fahmay dhowr waxyaalood oo muhiim ah oo ku saabsan sida shukulaatada iyo kareemku U NOQDO ganache aan ogaan karo sababta ay taydu u shaqeyn weyday.
Waa maxay ganache shukulaatada
Ganache shukulaatada aasaasiga ah waxaa lagu sameeyaa kuleylka kuleylka iyo ku shubista shukulaatada. Kulaylka kareemku wuxuu dhalaaliyaa shukulaatada. Labada maado ayaa markaa la walaaqayaa ilaa ay ka siman yihiin. Mararka qaarkood dhadhan kale ayaa lagu daraa. Subag ama sharoobada galleyda sidoo kale waa lagu dari karaa si ganache uga dhigto mid dhalaalaya.
Waxay kuxirantahay nooca cunto karinta ee shukulaatada aad raacaysid, waxaad u isticmaali kartaa shukulaato ka badan kareemka ganache shukulaatada ka sii dhumuc weyn. Shukulaatada iyo kareemka loo siman yahay (saamiga 1: 1) ayaa sida caadiga ah loo isticmaalaa dhaxan aad u jilicsan, shukulaatada faleebo ama dhaldhalaal. Saamiga 2: 1 (laba jibbaar intee ka badan sida kareemka ah) ayaa caadi ahaan loo isticmaalaa sameynta qashinka ama ganache baraf ah oo adag oo qabow. Ganache shukulaatada cad waxaa badanaa lagu sameeyaa saamiga 3: 1 ee shukulaatada.
Heerkulka ganache shukulaatadaada sidoo kale waa muhiim. Marka ganache shukulaatadaada markii ugu horreysay la sameeyo oo weli diiran, waa dareere aad u badan. Kani waa qaabka ugufiican ee dhalaalka, sameynta keegga faleebada ah ama loo isticmaalo jalaatada.
U oggolow ganache shukulaatada inay fadhiisato heerkulka qolka wuxuu u oggolaanayaa shukulaatada inay qaboojiso oo ay noqoto semi-adag mar kale. Marxaladda noocan ah ee nuska loo dhigay waa waxa aan ugu yeedho marxaladda joogteynta subagga lowska waxayna ku habboon tahay in la barafeeyo keega.
sida loogu qurxiyo keeg aroos leh ubax cusub
Haddii ganache shukulaatadaadu ay tahay TOO qabow, waxay noqon kartaa mid aad u adag oo aan la faafin karin.
Sidee u sameysaa ganache shukulaato ah
Cabir shukulaatadaada oo si fiican u jar haddii ay ku dhex jirto qaybo waaweyn si ay si siman u dhalaasho
Kariimkaaga kuleyli ilaa inta uumi ka bilaabmayo inay dusha ka kacdo. Si tartiib ah u yeer si aad uga hortagto gubashada dhadhanka runtii xun. Ha ka fogaan ama kareemkaagu wuu karkari karaa.
Kariimkaaga kulul ku shub shukulaatada oo hoos u riix shukulaatada sidaa darteed dhammaantood waxay ku hoos jiraan dusha kareemka. U daa shukulaatada iyo kareemka inay fadhiistaan ​​5 daqiiqo.
Kariimka iyo shukulaatada wada kariim ilaa ay ka siman tahay. Ka bilow wareegyo yaryar oo ku yaal bartamaha illaa iyo inta shukulaatada iyo kareemku ay ka bilaabayaan abuur.
Haddii aad leedahay buro ama shukulaato aan dhalaalin waxaad isticmaali kartaa isku-darka isku-darka si ganache-kaaga uga dhigmo mid kareem leh oo aan buro lahayn.
Waa maxay saamiga ugu wanaagsan ee ganache shukulaatada kaamil ah?
Cuntada ganache shukulaatada kaamil ah waxay kuxirantahay saamiga shukulaatada iyo kareemka aad isticmaasho.
Saamiga waa eray cabsi ku ah dubista newbie. Waxaan xasuustaa inaan gebi ahaanba fahmin waxa loola jeedo gabi ahaanba. Asal ahaan, macnaheedu waa intee in le'eg shukulaatada kareemka aad isticmaaleyso. Lambarka koowaad wuxuu matalaa shukulaatada, kareemka labaad.
Had iyo jeer waxaan ku shaqeeyaa oz maxaa yeelay waxaan ku xumahay xisaabta. Marka tusaale ahaan, haddii aan diyaarinayo habka loo karinayo ganache oo aan isticmaalo 32 shukulaato ah, waxaan isticmaali doonaa 16 oz oo kareem ah (2: 1). Saamigan, had iyo jeer waxaa jira laba jibbaar ka badan inta kareemka ah sidaa darteed haddii aad kareemka kor ugu qaaddo 12 oz, markaa waxaad isticmaali lahayd 24 oz oo shukulaato ah si aad saamiga isku mid uga dhigto.
Saamiyada Ganache way isbeddeleysaa iyadoo kuxiran sida aad u isticmaali doontid. Waxaan hoos ku taxay saamiga aan u adeegsado ganache. Waxaan isticmaalaa kaliya shukulaatada mugdiga ah ee macaan ama shukulaatada cad (labadaba laga bilaabo Guittard).
Haddii aad isticmaaleyso nooc ka duwan oo uusan u dhumuc weynayn ama u khafiifsanayn sida aad rabto, kaliya maskaxda ku hay, shukulaatada ka sii madoobaata iyo kookaha% badan, way sii adkaan doontaa.
Saamiga shubulaatada shukulaatada madow - 1: 1
8 oz shukulaato semi-macaan ama mugdi ah
8 oz kareem culus
Ganache-kani wuxuu adeegsadaa qaybo siman oo shukulaatada ah iyo kareemka culus marwalba wuu yara jilicsan yahay Way fiicantahay inaad u isticmaasho inaad ku shubto jalaatada markay diiran tahay, adigoo u isticmaalaya muraayad ahaan keega ama qabow badan oo kareem leh oo jilicsan oo buuxinaya keegaaga iyo keega.
Ganache jilicsan ayaa sidoo kale la karbaashi karaa si loo sameeyo a ganache karbaashay barafoobid.
Saamiga shukulaatada madow ee sonkorta - 2: 1
16 oz shukulaato semi-macaan ama madow
Saamigan ayaa inta badan loo isticmaalaa adduunka qurxinta keegga. Waxay xoogaa ka adag tahay saamiga 1: 1. Markaad u oggolaato ganache inay qaboojiso dhowr saacadood heerkulka qolka (isku-dheelitirka subagga looska) waxay ku habboon tahay qaboojiyaha keega arooska ama keegga la farsameeyay.
Waxaan sidoo kale jecelahay inaan u adeegsado isku-dheelitirnaanta tan keeg la jeexjeexay maxaa yeelay marka dhaxantu si buuxda u dhacdo, waxay haysaa keeg aad u deggan. Marka ganache ay ku jirto heerkulka qolka sidoo kale waa isku xirnaanta ugu fiican ee lagu rogo gawaarida.
* talo-siin: waxaad ku dhadhamin kartaa ganache-kaaga adoo miiraya geedo yaryar ama xawaash ku jira kareemka. Shaahu wuxuu ku sameeyaa xoogaa dhadhan fiican ganache.
Saamiga shukulaatada Ganache ee sonkorta - 2.5: 1
20 oz shukulaato cad
Shukulaatada caanuhu waxay ku fiican tahay sameynta ganache laakiin maxaa yeelay waxaa ku jira sonkor badan iyo caano adag, uma xasilloon tahay sida shukulaatada madow. Waxaad u baahan doontaa inaad xoogaa shukulaato ka badan u isticmaasho ganache-kan si aad u dhisto.
Shukulaatada Shukulaatada Caddaan Heerka Qaboojinta - 3: 1
Shukulaatada caddaanka ah kuma jirto kookaha si ay uga caawiso dejinta, kaliya subagga kookaha markaa waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho shukulaato badan oo dheeraad ah si aad si fiican ugu degto. Waxaan isticmaalaa saamiga 3: 1 laakiin waan ogahay dadka qaarkiis inay aad u sareeyaan ilaa 4: 1.
Ma ogtahay in ganache shukulaatada cad ahi aysan dhididin ayna ku habboon tahay in lagu isticmaalo jawi aad u kulul sida Florida, Caribbean iyo Texas?
Cynthia White laga bilaabo CAKED By Cynthia White waxay isticmaashaa ganache shukulaatada cad cad oo si gaar ah macaamiisheeda ugu sareysa waligoodna kuma lahan arimo ku saabsan keega oo dhalaalay ama isku badalay cimilada aadka u kulul.
Biyaha Ganache 6: 1 (doolsho faleebo ah)
6 oz shukulaato cad ama nacnac midab leh ayaa dhalaalaya
1 oz biyo diirran
Ganache biyaha waa ganache lagu sameeyo biyo halkii kareem. Dhadhanku weli waa uu fiican yahay laakiin caano laguma daro. Ganache biyaha ayaa sameeya dhibcaha ugu fiican ee keega yar.
Ku dhalaasho shukulaatadaada cad maddiibada galaaska kuleylka kuleylka kuleylka ah ama microwave-ka. Ha kululayn
U ogolow qaboojiyaha illaa 90 digrii ka hor intaadan ku shubin keega ama haddii aad isticmaaleyso si aad u baraf dhigto keegaaga, u sii daa dhumuc ahaanta subagga looska ka hor intaadan isticmaalin.
Shukulaatada Noocee Ah Ayaa Ugu Fiican Ganache?
Mararka qaar, dhibaatada ganache-gaagu wuxuu noqon karaa shukulaatada aad isticmaaleyso. Waan ogahay in markii ugu horeysay ee aan bilaabay dubista aanan ogeyn in shukulaatada runti ay ku timid qaabab fara badan oo BADAN. Laakiin ha ka welwelin, maaha cabsi sida ay u muuqato. Asal ahaan, tayada sare ee shukulaatada aad isticmaasho, ayaa sifiican ganache-kaaga u dhadhamin doonaa.
Taasi micneheedu waa maxay?
Waxay macnaheedu tahay ka tag dhunkashada Hershey iyo shukulaatada shukulaatada ee khaanadda ku jirta iskuna soo qaado xoogaa shukulaato dhab ah. Nacnaca shukulaatada badanaa waxay leeyihiin waxyaabo kale sida xasiliyayaal oo ka JOOJIYA inay dhalaalaan si ay ugu hayaan baakadaha ama aysan lumin qaabkooda inta la dubo.
Runtii jukulaatooyinka jaban sida jilista shukulaatada aad uma dhadhamiyaan maxaa yeelay waxay leeyihiin buuxiyo fara badan sida khudradda oo yaraata halkii ay ka ahaan lahayd subagga kookaha. Haddii shukulaatadu aysan dhadhamin, ganache ma dhadhamin doono.
Waxaad ka iibsan kartaa shukulaatooyinka baararka ku yaal dukaanka raashinka laakiin taasi way qaali noqon kartaa. Qiyaastaada ugufiican ayaa ah inaad ka raadsato shukulaato tayo wanaagsan leh ha ahaato dukaanka alaabada laga soo iibsado ee maqaayada ama keegga lagu qurxiyo keegga kuu dhow ama waxaad ka iibsan kartaa Amazon Raadi shukulaatada ugu yaraan 53% kookaha la mid ah Shukulaatada Callebaut (waa inay ku taxan tahay calaamadda).
Waxaan u isticmaalaa canjeerada shukulaatada mugdiga ah ee loo yaqaan 'Guittard semi-macaan' maxaa yeelay waxaan ka iibsan karaa Winco-ga maxaliga ah tiro ahaan waana qiimo wanaagsan. Haddii aad ka heli karto meel kuu dhow oo aad wax kaga iibsan karto wax badan ama baarar waaweyn, taasi waa tan ugu fiican lacagtaada maxaa yeelay shukulaatada ayaa culus oo qaali noqon kara rarka.
macmacaan keega jilicsan ee cad
Waxaa sii dheer waxaan marwalba u muuqdaa inaan ka maqanahay shukulaatada markii aan u baahdo oo aanan helin waqti aan ku dalbado!
Sida Loo Hagaajiyo Buruq Ganache
Haddii aad leedahay wax buurbuur ah waxaad dib ugu kululeyn kartaa waxa ku jira oo dhan microwave-ka 30-seken oo koror ah illaa ay ka siman tahay ama waxaad isticmaali kartaa isku-darka isku-darka si aad uga dhigto kareemo aad u sarreeya.
Sidee loo hagaajiyaa ganache jabay
Haddii ganacheagu jabo (saliidda ka soocaysa shukulaatada) waxaad ku dhex milmi kartaa qaado oo biyo diiran ama caano ah. Sii wad inaad ku darto biyo diiran qaaddo qaadasho markiiba illaa ay ka wada yimaadaan.
Sida loo hagaajiyo ganache
Ganache waxay ku heli kartaa miraha firida marka caanuhu aad u kulul yihiin. Had iyo jeer u oggolow shukulaatada / kareemkaaga inay istaagaan 5 daqiiqo ka hor inta aadan dhawaaqin.
Haddii ganacheagu uu yahay mid firid ah, kaliya wax walba dib ugu dhalaali biyo kululeeyaha oo dib haloogu dejiyo. Haddii aadan dib u dhalaalin, ganacsatadu waxay yeelan doonaan afka aad u xun.
Sida loo hagaajiyo ganache qulqulaya
Haddii ganache aad u khafiif ah oo uusan dejin, ku dar shukulaato badan oo dhalaalay oo xoq si aad isugu darto. Waxaan ku bilaabi lahaa 2oz oo waxaan arki lahaa halka aad joogto kahor intaadan kudarin waxbadan si aan uga fogaado ganacsiyada inay noqdaan kuwa adag.
Haddii ganache aad u adag yahay waxaad ku dari kartaa 1oz oo kareem diiran si aad u dabciso.
Ammaan ma tahay in ganache looga tago habeenkii?
Ganache waxaa looga tagi karaa heerkulka qolka 48 saacadood, waxaa la qaboojin karaa 1 toddobaad ama la qaboojin karaa 6 bilood. Ganache diiran oo kujirta microwave-ka 15 ilbidhiqsi oo dillaaca ama ha u timid heerkulka qolka si dabiici ah.
Hubso inaad daawato fiidiyaha hoose sida loo sameeyo ganache shukulaatada waxaanan rajaynayaa in qoraalkani kaa caawiyay inaad yeelato kalsooni aad ku baxdo oo aad ku sameyso ganache! Waxaan ku dhaaranayaa cabsi maahan oo hadaad wax su'aalo ah qabtid gabi ahaanba, aniga uun iigu dhaaf faallooyinka iyo haddii aad raadineyso bulsho qurxinaysa keegga inay ku caawiyaan wakhti kasta oo maalinta ka mid ah, ku soo biir kooxdayada facebook!
Cuntadan ganache shukulaatada waa mid aad u fudud. Shukulaatada ku shub kariim kulul oo xoq! Waxay kuxirantahay heerkulka, waxaad sameyn kartaa dhaxan, dhibco ama xitaa qashin. Ganache waa cunnada macmacaanka shukulaatada!
Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:10 daqiiqado Wadarta Waqtiga:labaatan daqiiqado Kalori:1140kcal
Dajinta Ganache 2: 1
▢16 ounces (454 g) shukulaatada madow ama nus-macaan
▢8 ounces (227 g) kareemka culus ee karbaashka
▢1 qaaddo (1 tsp) cusbo fiican
▢1 qaaddo shaaha (1 tsp) soosaarida vanilj ama wixii soo saar kale ah
Jilicsan Ganache Frosting 1: 1
▢8 ounces (227 g) 60% shukulaato tayo sare leh Sida isweydaarsiga - qiyaastii $ 8 / lb
▢1 qaaddo shaaha (1 tsp) cusbo fiican
▢1 qaaddo shaaha (1 tsp) soosaarida vanilj
Shukulaatada cad cad Ganache
▢18 ounces (510 g) shukulaatada cad
▢6 ounces (170 g) kareemka culus ee karbaashka
▢1 ounces (1 tsp) cusbada badda ee fiican
Shukulaatada ganache Tilmaamaha
* Fiiro gaar ah * adoo adeegsanaya cabir ayaa lagugula talinayaa saxsanaanta iyo inaad hubiso in ganacheyahaagu soo baxaan.
Ku miisaan miisaankaaga shukulaatada baaquli caddaynaya kuleylka
Kariim kululey digsi digsi ilaa uumintu ka bilaabato inay ka kacdo dusha sare laakiin wali ma karkareyso.
Shukulaatada ku shub kareem kulul, shukulaatada hoos u riix si ay dhamaan uga hooseyso dusha kareemka oo u daa ilaa 5 daqiiqo.
Ku dar milix iyo vanilj wax walbana isku walaaq ilaa ay ka siman yihiin. Haddii wax buurbuur ah ay sii hadhaan, ku dar walaaqada microwave 30 ilbidhiqsi oo mar labaad hoos u dhuuq. Haddii aad leedahay blender blender waxaad u isticmaali kartaa inaad ka soo saarto wixii buurbuur ah ee haray iyo sidoo kale ganache kareem super ah
Ganache waxaa lagu hayn karaa qaboojiyaha mudo 1 todobaad ah si loo qaboojiyo ilaa 6 bilood.
U adeegida:labaoz|Kalori:1140kcal(57%)|Kaarboohaydraytyada:81g(27%)|Protein:10g(labaatan%)|Dufan:85g(131%)|Dufan Dufan:kontong(250%)|Kalastarol:112mg(37%)|Sodium:1129mg(47%)|Kalibaalium:913mg(26%)|Fiber:12g(48%)|Sonkor:55g(61%)|Vitamin A:1185IU(24%)|Vitamin C:0.4mg|Kaalshiyamka:143mg(14%)|Bir:9.6mg(53%)
sida loo sameeyo keeg midab badan leh
sida loo qaabeeyo daaweynta krispie bariiska qaababka
sida loo sameeyo keeg sanduuq ah oo qoyan oo dheeraad ah